ဘီးလူးခေါင်းပော်ပြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ဘီးလူးခေါင်းပော်ပြီး
Posted by zaymdy on Oct 2, 2011 in Politics, Issues | 12 comments
သမတ ဦးသိန်းစိန်က မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်တောဘူးလို. ပြောခဲ.တာကို တရုတ်နိုင်ငံ က ပြန်လည်. ဆေးနွေးဖို. သတင်းထုန်ပြန်ပါတယ်..ဒါကတရုတ် အစိုး၇အနေနဲ. မြန်မာနိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်တာလား အာဟာပြတာလား ပြည်သူဆနတာအရ မလုပ်တာကို သိရဲသားနဲ. ဘာလို. အိမ်နီးချင်းကောင်းလို. အသံဟစ်ထားတယ် တရုတ်ကြီးက… သူတို.အကျိုးအမြတ်ထိတော. အသံထွက်လာပါပြီးဗျာ… ကျွန်တော် အနေနဲ.ကတော. ဘာမှပြန်လည်း ဆွေးနွေးစရာမလို.ပါဘူး မလုပ်တော.ဘူးဆို. မလုပ်တော.ဘူးပဲ ဘာမှ လာရှင်းပြမနေနဲ. တရုတ်ကြီး မကျေနပ်ရင် ချမယ်ဗျာ အခုချမလား ရွာတည်းက လူတွေ.ခော်လိုက်ဦးမယ် ဒါပဲ…
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်သဘော နဲ့ ကိုယ်
သူတို့ က ဝင်စွက်ဖက်လို့ 
“နိုင်ငံတော်၏ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်သော
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖျက်သမားများအား ဘုံရန်သူအဖြစ်
သမတ ကြီးရဲ့ သ၀ဏ်လွှာကိုကြိုဆိုပါတယ် တရုပ်ကလဲ ဆွေးနွေး မယ်ဆိုတာလဲ တရားပါတယ်
အရင်လူတွေက တိုင်းပြည်မျက်နှာမကြည့်ပဲ ရောင်းစားသွားခဲ့တာကိုး နောက်လူရှင်းယုံပေါ့
နှစ်နိုင်ငံစာချုပ်ဆိုတော့လဲ ရှင်းရုံပေါ့ ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့တော့မရဘူး အရင်လူဆဲရုံပဲ
So far, Chinese government made nothing wrong.
If there isacontract, then, there are rights & responsibilities.
If one side breach the contract terms or conditions or clauses,
Then, they must compensate for the damages suffered by other side.
It is quite fair.
If Myanmar Government cannot please Chinese Government in another way,
May be, this case will go to International Arbitration Court.
Don’t worry,” လျော်ကိုလျော်ရမှာ “.
It’s inter-governmental contract/agreement, notachild play.
But, in my opinion,” ဒီလောက်လျော်ကြေး ဟာ ပြောလောက်မယ်မထင်ပါဘူး ”
ရေကာတာ မဆောက်ခင် ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာရေးအဖွဲ့က မဆောက်သင့်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အချက်၊ အရင်မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ဘယ်လို အပေးအယူလုပ် စာချုပ်သွားခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ လေ့လာခွင့်ရရင် စာချုပ်ရဲ့ တရားဝင်မှုကို သိနိုင်ပါတယ်။ တကယ် ဥပဒေကြောင်း ပြသနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ တတိယအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးကနေ အသေးစိတ် ထပ်မံလေ့လာရပါမယ်။ ဦးဖောရိန်က ဒါတွေမသိဘဲနဲ့ ဘယ်နှယ်လို့ တရုတ်မမှားဘူးလို့ ပြောနိုင်သလဲ..။ စာချုပ်ဆိုတိုင်း တရားဝင်တာမှ မဟုတ်တာ။ အရာရာအားလုံးသည် အခြေအနေ အချိန်အခါအရ ပြောင်းလဲနေတာပဲ။ တရုတ်ကြီး မသိခဲ့ဘူးဆိုရင် လည်လွန်းတဲ့ဘီး ချီးသင့်တာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
I means, the reaction of Chinese Government after U Thein Sein’s Speech.
( မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆက်လက် မလုပ်ဆောင်တောဘူးလို. ပြောခဲ.တာ )
They ( Chinese ) only said/request to,
– respect the agreement &
– respect their Company’s right &
( ”တရုတ်ကုမ္ပဏီများ၏ တရားဝင်မှု အခွင့်အရေးကို နိုင်ငံများက အာမခံသင့်ကြောင်း )
– Let deal in the table
( ”နှစ်ဖက်စလုံးက ခင်မင်းရင်းနှီးစွာ အကြံပြုပြီးတော့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ဆက်နွှယ်တဲ့ကိစ္စတွေကို သင့်တော်သလို ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်” ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဟောင်လေက ပြောကြားခဲ့သည် )
It clearly shows, they said politely, legally & diplomatically ( so far ).
( Even they may be angry, but, they didn’t show it in their request )
That’s why, I said ” Chinese government made nothing wrong ( so far ) ”
” ရေကာတာ မဆောက်ခင် ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာရေးအဖွဲ့က
မဆောက်သင့်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အချက် ”
In fact, So far ( until now ),
No appropriate body admitted it.
Neither BANCA ( ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ), Myanmar Government, Chinese Government nor CPI
admitted this ( မဆောက်သင့်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အချက် ).
Let’s say, it is still in rumor stage ( even I also believe it ).
Normally, before doinganew project,
Government Administrative body makesalot of assessments.
This will include Economic Assessment, Environment Impact Assessment,
Job Opportunities & Labor Possibility Assessment,
Ground/Soil Assessment & etc.
Environment Impact assessment is barely one among the others.
Actually, all of them may have pros & cons ( advantages & dis-advantages ).
Myanmar Government should carefully compare those pros & cons &
If they considered there are more advantages than dis-advantages,
They would signed the agreement / contract.
Later part of my comment is my explanation about contract law.
( I ( mariners ) have learned Basic International Law & contract law )
But, I admitted, my knowledge about International Law is very limited,
So, I am not very sure whether this contract can be void/null,
because of public disorder / public disagreement / environmental impacts.
Only thing, I am sure is,
This type of case will generally go to International Arbitration Court.
Moreover, I think,
” ရေကာတာ မဆောက်ခင် ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာရေးအဖွဲ့က မဆောက်သင့်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အချက် ” This fact alone will not make this contract void & null.
Let’s say, it is not sufficient enough.
It might be better, some law scholars ( villagers ) discuss about this matter is more appropriate. My Law knowledge is very limited, especially without seeing those contract & EIA.
Don’t forget, I repeatedly said,
I am also against / opposed to build this “ မြစ်ဆုံ” Dam.
I also want to preserve “ မြစ်ဆုံ” as national heritage.
I just want our villagers to understand the real situation.
By the way ကြောင်ကြီး,
Those Chinese Government replies arealot polite than
our လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း saying.
” မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဆက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ”
”နှစ်ဖက်စလုံးက ခင်မင်းရင်းနှီးစွာ အကြံပြုပြီးတော့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ဆက်နွှယ်တဲ့ကိစ္စတွေကို သင့်တော်သလို ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်”
ဒီကနေ့အထိ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုဟာ ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ EIA report ကို မဖတ်ရသေးဘူး။ နောက်ပြီး မူရင်းစာချုပ်တွေကိုလည်း မမြင်ရသေးဘူး။ ဒီတော့ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ ထိခိုက်လဲဆိုတာ မသိရဘူး။
ဦးသန်းမောင် (စစ်တွေ) – စာချုပ်တွေမှာForce Majeure Clause ဆိုတာပါတယ်။ အဲဒီပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအထဲမှာ အကြုံးဝင်နေတယ် ဆိုရင်တော့ အတင်းအကျပ် လုပ်လို့မရတဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။ ဟိုဘက်၊ ဒီဘက် အတင်းအကျပ်လုပ်လို့ မရတဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။ အဲဒီForce Majeure Clauseဆိုတာကတော့ လူထုရဲ့ Public ပေါ်လစီကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရရဲ့မူဝါဒ ပြောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စာချုပ်တွေ ပြက်ပျယ်သွားနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အကျုံးဝင်နေတယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီ Force Majeure Clause ထဲမှာ အကျုံးဝင်နေတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စကို အတင်းအကျပ်လုပ်လို့ မရပါဘူး။
အဟုတ်လား၊ သည်လောက်မြန်တယ်နော်—- အင်းပေါ့လေ kyaw ပြောသလို မှန်ပါတယ် နိုင်ငံတစ် ကာရေးရာပေါ့၊ ၀န်ကြီးဌာနစာချုပ်ကြီးကိုး — ၊ တစ်ခါတည်းပြတ်အောင်သာပြောပြီး၊ လျှော်ကြေးပေး လိုက်ပါဗျာ၊ပွဲခယူထားသူတွေချမ်းသာပါတယ် ဆွေ တစ်သက်မကပါဘူး၊ သူတို့မှာ တာ ၀န်ပိုရှိတာပေါ့၊ နိုင်ငံတော်ကျောက် စိမ်းတွေမ ကုန်သေးဘူးမဟုတ် လား၊ သည်တစ်ခါတော့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒအတွက်၊ ဧရာဝတီအတွက် လို့မှတ်ပါ့ မယ်၊ စိုးရိမ်တာက နယ်စပ်မှာ (၀) လူမျိုးတွေက ခြိမ်းချမ်ရေးစာ ချုပ်ချုပ်မယ်၊ သူတို့လူမျိုးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားကဒ် ထုတ်ပေးရမယ်၊ စားဝတ်နေရေး ထောက်ပံ့ ရမယ်လို့ ၊ ရေကာ တာကိစ္စနဲ့မလှမ်းမကမ်းရက်မှာပဲတောင်း ဆိုနေသတဲ့၊ကျုပ်တို့အိမ်နီး နားချင်း တရုတ် /ထိုင်းတို့က တစ်ခုပေးရ ရင် သူတို့အတွက်တခုမက – ပြန်တောင်းတတ်ကြတယ်၊(၀) ဆိုတာ တရုတ် ကွန်မြူနစ်တပ် သား တွေစိမ့်ဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့စည်းတစ်ခုပါ၊ တိုင်းရင်းသားဆိုပေမည့် အင်မတန်သတိထား ရတဲ့သူတွေပါ၊ (၀)တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ကြီးတွေကို တော့ (အားနာ ပါတယ်၊ တောင်းပန်ပ်ါတယ် )သည် လိုပြောရလို့၊ ဒါလည်းတစ်ချိန်က တိုင်းပြည်ဖျက်ခဲ့တဲ့ ကွန် မြူနစ်ရဲ့ဆိုး မွေတွေပါပဲ၊ အဲသည်ဆိုးမွေကို သိလျှက်၊ တရုတ်ကိုပုံ အပ်၊တိုင်းပြည်လက် ညိုးထိုးရောင်းစား ခဲ့တဲ့လူတစ်စုကိုအံ့သြမိပါရဲ့၊တော်ကြာ(၀ ) အမည် ခံတရုတ်တပ်သား သိန်းနဲ့ချီပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားပေးလိုက်ရမှာဆိုးလို့ပါ၊ စစ်အာဏာရှင် လက်တစ်ဆုပ်စ်ာရဲ့ဆိုးကျိုးဆက်ကို လက်ရှိသမ္မတကြီးတို့နဲ့လက် တွဲပြီးတို့ပြည်သူတွေ – ကိုင်းအရေးကြီးက သွေးနီး ကြ ပါစို့ဗျား။(တရုတ်အစိုးရသာလူကောင်းစိတ်မွေးတာပြချင်ရင်သည်ပွဲမှာ- သူ့အတွက်အခွင့်အရေးပြနိုင်
မပူပါနဲ့ တရုတ်လာထိရင်အမေရိကန်ကို ခေါ်မယ်လေ ။ အမေရိကန်က မြန်မာအစိုးရနဲ့တရုတ်
တွေ ပူးပေါင်းနေတာကြောင့်သာ မြန်မာကိုမကူညီတာဘာ ။တရုတ်နဲ့ခွာပြဲရင်တော့ လာမှာပေါ့။
မြန်မာ နိုင်ငံ ကိုလိုချင် နေတာ အဓိက က .. တရုတ် ရယ် US ရယ် နော ..
တစ်ယောက်မက မြန်မာနိုင်ငံကို လိုချင် နေ မှတော့ .. ဈေးတင်လို့ရပီပေါ့ .. ဟီး..